Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चाडबाडमा प्याकेटका खानेकुराको प्रयोग बढ्दो – Emountain TV
काठमाडाैं, १७ असाेज । आधुनिक जीवनशैली, बजारीकरण र कामको व्यस्थताले मानिसहरूले खाने खानामा पनि परिवर्तन आएको छ । घरमा पकाएर खान अल्छि मान्नु र नभ्याएको बहानामा मानिसहरु प्याकेट खानामा आकर्षित भएका छन् ।
यो आकर्षणले मानिसहरु भने झन अस्वस्थ बन्दै गएका छन् । खानामा आएको परिवर्तनसँगै नेपालीहरूमा विभिन्न रोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ । अहिले बजारमा लेज, कुरमुरे चाउचाउ लगायतका प्याकेट खाना छ्यापछ्यापती मात्रामा हरेक पसलहरुमा सजिलै पाईने गर्दछ ।
स्थानीय स्तरमा पाइने कोदो, फापर, गहुँबाट उत्पादन हुने खानेकुरालाई नेपालीहरूले खानाको रुपमा उपभोग गर्ने बानी कम हुँदै गएको छ ।
यस्ता खानाको विक्रिवितरण अरु समय पनि निकै नै हुने गर्दछ । तर चाडबाडका समयमा अरु समान जस्तै यस्ता प्याकेटका खाना बढीमात्रामा विक्रि हुने गर्दछ । चाडपर्व मान्नका लागि आफ्ना जन्मथलो जाने क्रममा बालबालिका लागि कोसेली स्वरुप होस वा यात्रामा आफैले प्रयोग गर्न होस् प्याकेटका खानेकुरा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
विशेषगरी बालबालिका र वयस्कहरु यस्ता प्याकेटका खानेकुराप्रति बढी आकर्षित हुने गर्दछन । तर बजारमा पाइने तयारी खाना खाँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने चिकित्सक बताउँछन ।
प्याकेटमा उपलब्ध हुने तयारी खाना सहज र स्वादिलो हुने भएकाले मानिसको आकर्षण बढे पनि त्यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु-याउने गर्दछ ।
प्याकेटको खानाले बच्चाहरूमा दाँत बिग्रने, युवा अवस्थामै हड्डी खिइने, दुख्ने समस्या देखिने, मोटोपन, सुगर लगायत स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका असर देखिने गर्दछ ।
अहिले चर्चा बजार अनुगमनको छ । हरेक चाडवाडको नजिक सरकारी संयन्त्र बजार अनुगमनको लागि चलमाउने गर्छ । अनुगमन कति प्रभावकारी छ ? आफ्नै ठाउँमा छ ।
तर खाद्य ऐन २०२३ को नियमावली २०२७ मा बिद्यालय हाताबाट २ सय मिटर भित्रमा यस्ता प्याकेटका खानेकुरा विक्रिवितरण गर्न नपाईने उल्लेख गरिएको प्याकेटका जंगफूडप्रति अनुगमनकारीको ध्यान जानसकेको देखिंदैन ।
नाम कहिलिएका विद्यालय हाता भित्रै यस्ता जंक फुडहरु खुलेआम विक्रिवितरण भइरेहका छन् । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने थाहा पाउँदा पाउँदै किन यस्ता वस्तुको विक्री वितरणमा अंकुश लाग्न सकिरहेको छैन ? सरोकारवालाहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यस्ता किसिमका कार्यको अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा खाद्य प्रविधिको हो तर नियमन निकायले यस विषयलाई सानो विषय सम्झदा भोली यसले डरलाग्दो रुप नलेला भन्न सकिंदैन ।